Ny fanamafisana DA-7 A3-Standard 1.Constant Height Head dia mifarana: Ny faran'ny haavony avo dia ahafahana miditra haingana amin'ny lohan'ny marary, tendany ary thorax. 2.Split Side Riles: Ny lamina PP 4pcs dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjera. 3. Platform matotra azo tanterahina: Ny lampihazo Matotra dia tabilao resin-tsoavaly izay mora esorina ary mora fitrandrahana. Ny lampihazo kidoro dia afaka manao X-ray ho an'ny takelaka aoriana ary manolotra ny marary kokoa. 4.Control Nitsabo ny mpitsabo S ...
Ny fanamafisana DA-7 A2-Drafitra 1.Constant Height Head dia mifarana: Ny faran'ny haavony avo dia ahafahana miditra haingana amin'ny lohan'ny marary, tendany ary thorax. 2.Split Side Riles: Ny lalamby PP 4pcs dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjerana ary ny sisin'ny sisiny 2 pcs akaikin'ny lakilasy dia manome serivisy fiarovana bebe kokoa ary manome koa ny fanohanana mandritra ny fitsanganan'ny marary. 3. Ny rafitra mizana mizana: Ny rafi-pandrefesana mizana an-tsokosoko eo ambany faran'ny tongotra dia arovana amin'ny fiantraikany ...
Ny fanitsiana D-A1-A1-Drafitra 1.Split Side Riles: Ny lalamby PP 4pcs dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjerana ary ny lalamby eo an-tsisin'ny 2 pcs eo akaikin'ny takelaka mandeha dia manome serivisy fiarovana bebe kokoa ary manome koa ny fanohanana mandritra ny fijoroan'ny marary. 2.Ny rafi-pandrefesana mizana: Ny rafi-pandrefesana mizana an-tsokosoko eo ambany faran'ny tongotra dia arovana amin'ny fiatraikany. 3. Platform matotra azo ampiasaina: Ny takelaka matotra dia plastika plastika izay mora esorina ary mora ampiasaina amin'ny fananganana ...